Dowlada Faransiiska Oo Daboolka Ka Qaaday In Ay Ka Qaybqaadanayso Dagaalka Lagula Jiro Al-Shabaab | Salaan Media
Dowlada Faransiiska Oo Daboolka Ka Qaaday In Ay Ka Qaybqaadanayso Dagaalka Lagula Jiro Al-Shabaab
June 21,2013 Muqisho(SM) War laga soo saaray wasaarada arimaha dibada dalka Faransiiska ayaa waxaa lagu sheegay in dowlada Faransiiska marnaba aysan ka garab bixin doonin Xukuumadda iyo shacabka Soomaaliyeed ee ayagu dhibaatada soo maray.
Xukuumadda Paris ayaa si weyn u cambaareysay weerarkii maalin ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho kaasi oo lagu qaaday Xarunta dhexe ee Qaramada Midoobay Soomaaliya ay ku leedahay, waxayna tacsi u direen ehalada dadkii waxyeelada ka soo gaartay weerarkaasi.
“Wixii dhacay waxay ahaayeen,wax laga caroodo waan sharaf dhac in xarun bini-adanimo la weeraro,taasina waxay ku tuseysaa inta ay la egtahay Cadowtinimada Mucaaradka”ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasaarada arimaha dibada dalka Faransiiska.
Dowlada Faransiiska ayaa sheegtay in ay qeyb ka noqoneysa dagaalada lagula jiro Ururka dowlada ka soo horjeeda ee Al-Shabaab sida warka lagu yiri, waxayna Xukuumadda Paris dhanka kale tilmaantay in ay ka qeyb qaadaneyso tababarada iyo sare u qaadista awooda iyo aqoonta ciidamada xooga dalka Soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan xaqiijinta amaanka dalka Soomaaliya.
Sidoo kale Xukuumadda Paris ayaa amaantay fal celibntii deg dega aheyd ee ay sameeyeen ciidamada dowlada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka dib weerarka markii uu dhacay, dagaalna goobta kula galay Al-Shabaab oo mudo Xarunta majaraha u hayay.
Hadalkani ayaa ku soo aadaya xili maalintii Arbacada aheayd dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab ay weerar ku qaadeen xarunta Qaramada Midoobay ee Muqdisho kaasi oo khasaaro kala duwan geystay.